Aretin'i Crohn amin'ny ankizy sy ny tanora | Bezzia
Aretin'i Crohn amin'ny ankizy sy ny tanora
Maria Jose Roldan | 28/08/2021 13:48 | tanora, Ho an'ny zanakao lahy
Aretina vokatry ny vavony sy ny tsinay lasa matetika sy mahazatra eo amin'ny ankizy sy ny tanora izy ireo. Ny angon-drakitra dia manondro fa isan-taona dia maro ny ankizy mijaly amin'ity karazana aretina ity, ao anatin'izany ny aretin'i Crohn.
Ity karazana toe-javatra izay misy fiatraikany amin'ny rafi-pandevonan-kanina, Izy io dia misy fivontosana mahery amin'ny tapany farany amin'ny tsinay kely sy ny fiandohan'ny lehibe. Amin'ity lahatsoratra manaraka ity dia hasehontsika anao ny fiantraikan'ity karazana aretina ity amin'ny zaza sy ny tanora ary ny zavatra tokony hataon'ny ray aman-dreny amin'izany.
1 Ny antony mahatonga ny aretin'i Crohn amin'ny ankizy
2 Ahoana no fisehoan'ny aretin'i Crohn
3 Inona no azon'ny ray aman-dreny atao amin'ny aretina Crohn
Ny antony mahatonga ny aretin'i Crohn amin'ny ankizy
Hatramin'izao dia mbola tsy misy antony manokana mahatonga ny zaza iray hijaly amin'ny tsinay. Misy antony isan-karazany toy ny fahazaran-tsakafo sy ny fidiovana izay mety hahatonga ny ankizy hanana aretina toy izany, noho ny fihenan'ny fiarovan-tenany. Mety koa noho ny antony ara-pirazanana sy ny tantaram-pianakavian'ilay zaza.
Ahoana no fisehoan'ny aretin'i Crohn
Misy fambara maromaro izay mety hanondro fa voan'ny aretin'i Crohn ny zaza iray:
Ny fivalanana dia iray amin'ireo soritr'aretina mahazatra indrindra amin'ity karazana aretina ity. Raha misy rà ity fivalanana ity dia tena azo inoana fa misy fivontosana ao amin'ny faritry ny zanatany. Raha ampy ny fivalanan'ny fivalanana, ara-dalàna ny hitrangan'ny fivontosana ao amin'ny tsinay kely.
Iray amin'ireo soritr'aretina mazava indrindra amin'ity aretina ity dia ny fanaintainana amin'ny faritra kibo manontolo.
Tsy fahampian-tsakafo izay miaraka fihenan-danja be.
Tsy fahampian'ny angovo sy ny havizanana amin'ny ora rehetra amin'ny antoandro.
Fisehoan'ny fery sy fistula.
Olana iraisana afaka mahazo miteraka vanin-taolana.
Inona no azon'ny ray aman-dreny atao amin'ny aretina Crohn
Mampalahelo fa karazana aretina mitaiza io ary tsy misy fanasitranana. Ny zaza dia tsy maintsy miaina ny fiainany manontolo amin'ny aretina tsinay. Hisy ny fotoana izay hanjary mihombo ny soritr'aretina raha ampitahaina amin'ny fotoana hafa izay malemy kokoa ny soritr'aretina. Ny fitsaboana izay arahina dia tokony hanana tanjona hampihenana ny soritr'aretina sy hanampy ny zaza na ny tanora hanana fiainana ara-dalàna araka izay azo atao. Fiovan'ny fahazarana mihinana na mihinana fanafody sasany afaka manampy amin'ny fifehezana ny aretin'i Crohn izy ireo.
Raha fintinina, Ny aretin'i Crohn dia matetika amin'ny fahatanorana noho ny amin'ny fahazazany,Na dia milaza aza ny angona fa mihamaro ny ankizy mijaly noho izany aretina izany. Raha ny soritr'aretina dia mitovy amin'ny olon-dehibe sy ny ankizy izy ireo. Raha io aretina io dia mijaly mandritra ny fahamaotiana dia azo inoana tokoa fa ny aretina dia miafara amin'ny fiatraikany ratsy amin'ny fivelarana ara-dalàna an'ny tanora. Nasongadin'ireo manampahaizana ny maha-zava-dehibe ny fampidirana amina ankizy hatramin'ny fahazazany, ny fahazarana mihinana tsara mba hisakanana azy ireo tsy hahazo aretina toy ny tsinay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » tanora » Aretin'i Crohn amin'ny ankizy sy ny tanora
Ny sakafo lehibe hiadiana amin'ny harerahana
Ireo fanamarinana lamba maharitra izay tokony ho fantatrao